China Silage Bhegi Kugadzira uye Fekitori | Ceres
CPT inogona kupa yakasimba yakasimba yakawanda-yakasara Metal- locene bhegi iyo yaishandiswa nesiriji uye yekuchengetedza zviyo. Kazhinji, mabhegi eCPT anopa nzira iri nyore, yakachengeteka uye yehupfumi yekuchengetedza kwenguva pfupi fodya, chibage, zviyo, fetiraiza nezvimwe zvigadzirwa, zvichibvumira mamiriro akakwana ekuvirisa uye kuchengetedza kwavo kukosha kwehutano.
CPT inogona kupa yakasimba yakasimba yakawanda-yakasara Metal- locene bhegi iyo yaishandiswa nesirage uye zviyo zvekuchengetedza. Kazhinji, mabhegi eCPT anopa nzira iri nyore, yakachengeteka uye yehupfumi yekuchengetedza kwenguva pfupi furuji, chibage, zviyo, fetiraiza nezvimwe zvigadzirwa, zvichibvumidza mamiriro akakwana ekuvirisa uye kuchengetedza kwavo kukosha kwehutano.
Kugadzira silage hunyanzvi uye sainzi. Okisijeni (mhepo) muvengi wekuvira. Kuvira kunowanikwa munzvimbo isina mweya kunotungamira ku100% kushandurwa kwakanaka kweshuga kune lactic acid iyo inoshanda senzira yekuchengetedza uye mold inhibitor. Kubhegi kunoitisawo mune yakachengetedzwa-yakanaka, yepamusoro silage iyo inopesana neforoma uye haitonhe. Silage bhegi ndiyo yega sisitimu iyo inonamira zvachose iyo silage, inochengetedza iyo Dry Matter uye inoderedza kurasikirwa kwesimba, zvichikonzera yakakwana yemhando yepamusoro chikafu.
Zvakajairika sosi yekuchengetera masisitimu ekare akaoma kubata uye kazhinji haigadzi mamiriro anodikanwa kune akanakisa kana akakodzera kuitavira. Kurasikirwa kwakatambudzwa neaya masisitimu kwakanyorwa nemakumi emakore ekutsvaga kweYunivhesiti. Uku kurasikirwa kunobva kubva ku20% kusvika pa40%.
Zvakanakira masaga ezviyo:
Silage bhegi inopa zvinotevera zvakanakira:
Yakaderera yekuchengetedza kurasikirwa nekuda kwekukanganisa.
Kuderedza kwekutanga mari.
Yakaderera yakazara yepagore mari.
Unlimited chengetedzo chinzvimbo
Zvizhinji zvekudyara zviri mumachini; kwete muzvivakwa zvinonetsa kutengesa kana zvirongwa zvachinja.
Yakakwira mhando silage.
Zvirinani manejimendi yesilage mhando uye mamiriro.
Inoderedza njodzi dzebasa.
7'x100 ', 150', 200 ', 250', uye 300 '
8'x100 ', 150', 200 ', 250', uye 300 '
9'x100 ", 150", 200 ", 250", 300 "
10'x150 ', 200', 250 ', uye 300'
11'x250 ', 300', uye 500 '
12'x200 ", 250", 300 ", uye 500"
14'x300 "uye 500"
Humwe saizi inogona kuwanikwa kana uchikumbira.
Pashure: Zviyo Bhegi
Ultra-simba flex tangi firimu
Kupisa Kwakanyanya Resistant Firimu